I-7 Ukutholwa okulula kweGebze Technology University kusuka Ngemigqa Ehlukile - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara41 KocaeliI-7 Ukutholwa okulula kweGebze Technology University kusuka Ngemigqa Ehlukile
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, TURKEY 0
ukufinyelela okulula kumayunivesithi ezobuchwepheshe kusuka kumigqa ehlukene
Omunye wabasebenzisana noMasipala waseKocaeli Metropolitan, wezokuThuthaPark A.Ş. Inikezela ngezinsizakalo zokuhamba eziya eGebze Technical University (GTÜ) ngomugqa we-7. Ngamabhasi avela ezifundeni ezahlukahlukene, i-7 inikeza abafundi izibonelelo zokuhamba ezilula zokuya eyunivesithi.
UMnyango WezokuThutha nokuhamba ngeTrafikhi, osebenza ngaphansi kokuxhumanisa ezokuThutha, iPaki, ufinyelela emigqeni yeYunivesithi i440, 490, 515, 525, 525S, 530 kanye ne560 futhi kubikwa ukuthi abafundi bangafinyelela kalula kule migqa.
I-7 244 ISIKHATHI NGEMIHLA YEMIHLA
Ngokuvulwa kwe-GTÜ, uMasipala we-Metropolitan, okhulisa isibalo sohambo ukunciphisa isibalo esingaba nakho, kusiza ukuthuthwa kwabafundi. Ulayini we-244, ohlinzeka ngohambo oluyindilinga lwe-7 service, uhlinzeka ngezinsizakalo ikakhulukazi ngezikhathi eziphakeme kakhulu ukuze abafundi bangabi nazinkinga zokuhamba. Amabhasi, ajwayele ukuthandwa ngabantu bendawo ngaphandle kwabafundi, athola ukwaneliseka kwezakhamizi ngokuqeda inkinga yokuhamba kulesi sifunda.
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zokuvakasha Komuzi eBursa Teleferik 31 / 01 / 2018 I-hike yokucasula izivakashi zakwamanye amazwe eBursa! I-Bursa Ropeway ukuhamba ngezinyawo abagibeli bangaphandle kwakungu-57 lira! Enye yezindlela ezibaluleke ezokuvakasha ebusika izikhungo Turkey Uludag ophumayo kakhulu ayethanda opharetha ikhebula emotweni e izivakashi yenkampani basekhaya nabamazwe angaphandle kwi-tariff ezahlukene siyasebenza yavela. U-opharetha waphila ngesigaba sangaphandle sohambo lokujikeleza kwamathikithi. Manje, abezinye izizwe baphoqeleka ukuba bakhokhe amakhilogremu angu-57 ukusebenzisa imoto yekhebula lapho beya ku-Uludağ. Abagibeli basekhaya bangasebenzisa ukuphakama kusukela ohambo olujikelezayo i-38. Lo mkhuba ubangele ukusabela okukhulu ekuhambeni okuningi. Isikhungo seqhwa se-City asibonwanga kulo nyaka, ikakhulukazi i-özellikle isonto
I-TransportationPark 12 Ukuhamba okulula kusuka esifundeni kuya eKocaeli University 02 / 10 / 2019 imikhumbi eTurkey omncane ezokuthutha Kocaeli Metropolitan Municipality ulaşımpark ezingaphansi kwayo, inani 12 ezifundeni ezahlukene Kocaeli University (COD) 'Yini engenza inkonzo yezokuthutha. UMasipala Metropolitan uhlinzeka ngezinsizakalo zokuhamba eKocaeli nge-336 ngebhasi elinemvelo. I-Metropolitan futhi inikeza abafundi ukufinyelela okulula kweKocaeli University ngonyaka we-2019-2020 wezifundo. Amabhasi kagesi wemvelo anobuhlobo bemvelo i-12 asuka ezindaweni ezahlukahlukene zesifunda ayaqhubeka nokwenelisa abafundi nezakhamizi ezifuna ukuya ezibhedlela zasenyuvesi. UKUTHOLA I-UMUTTEPE NGESIKHATHI esisodwa Izakhamizi kanye nezabafundi zidlulisela e-Kocaeli University nge-200, i-250 ne-280 bese zisuka esiteshini sebhasi zidlula ngomugqa 10. Gebze, ...
Imfihlo yokuhamba kalula kusuka eGebze kuya e-Istanbul 19 / 07 / 2019 UGebze Garage weTravelationPark A.Ş., ongaphansi kukaMasipala waseKocaeli Metropolitan, usebenza njengebhuloho phakathi kweKocaeli ne-Istanbul. Itholakala emngceleni wamadolobha amabili, igalaji lidlulisela izakhamuzi ezindaweni eziphephile, ezinethezekile nezisanda kungena ezifundeni zaseGebze, Çayırova, Darıca naseDilovası. Kunamabhasi we-103 egalaji laseGebze futhi ngokwesilinganiso abagibeli abayinkulungwane be-22 ngosuku bafika lapho beya khona ngokushesha, ngokunethezeka futhi ngokuphepha ngala mabhasi. Amabhasi ahlinzeka ngezinto zokuhamba kuzo zonke iziteshi zaseMarmaray ngaphakathi kwemingcele yeKocaeli futhi enza kube lula ngezakhamizi ukufinyelela e-Istanbul. Ukunikeza izinsizakalo zokuhamba kwizakhamizi ngokuqonda kweMisafir Guest Orients Service Ulaşım, iTransationPark itholakala kuzo zonke izifunda zaseKocaeli…
Ukuthutha komphakathi eBursa kuyothathwa kusuka kumugqa owodwa 09 / 01 / 2013 Bursada zokuhamba zomphakathi uzocelwa kuphela noma ngisho Bursa Metropolitan Municipality sika zokuthutha inkampani BURULAŞ yezakhamuzi ukuthola ulwazi mayelana zokuthutha umphakathi kanye ucingo oluseduze call centre e yaseYurophu ukuthi aya service ukuze sifinyelele kalula izikhalazo sebhasi, ibhasi uma esikhathini esizayo futhi iziphi izindlela Abantu abangu-700 abayizinkulungwane bahamba ngezithuthi zomphakathi njengebhasi, trams kanye ne-BURSARAY, ngenkathi ingqalasizinda yezobuchwepheshe ivuselelwa ukuze inikeze izinsizakalo zokuthutha zomphakathi ngendlela enempilo nangcono. I-24 yosuku emazingeni e-European call call center osungulwe ngaphakathi Buruluş ...
Enye yale migqa emithathu izoba umzila wezokuthutha 17 / 12 / 2012 Omunye wemigqa emithathu kuyoba yilapho engaphansi komgwaqo angeke adinge iKocaeli metro i-AKP Kocaeli iSekela likaFikri Işık, inhlangano yeKartepe ihlangana nabaphathi, izinsizakalo ezilinganisiwe. U-Işık, uKartepe noKocaeli mayelana nezinhlelo ezintsha zafika kumaphuzu, futhi babonisa imibono yabo ngokutshalwa kwezimali esikhathini esizayo. Ekhuluma emhlanganweni owawubanjwe uMeya weSifunda sase-AKP Kartepe uHasan Kandaz noMeya waseKartepe u-Şükrü Karavut, i-AKP MP uFikri Işık wakhuluma ngesigamu sokugcina esifike esitimeleni esisheshayo esisebenza emgwaqweni waseKöseköy-Gebze. Isitimela se-suburban esivela ku-Acısu siyokwazi ukuthwala kalula abagibeli ku-Izmit noGebze. Ngakho, uKocaeli ngeke adinge imitha "...
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zokuvakasha Komuzi eBursa Teleferik
I-TransportationPark 12 Ukuhamba okulula kusuka esifundeni kuya eKocaeli University
Imfihlo yokuhamba kalula kusuka eGebze kuya e-Istanbul
Ukuthutha komphakathi eBursa kuyothathwa kusuka kumugqa owodwa
Enye yale migqa emithathu izoba umzila wezokuthutha
Ukumenyezelwa kwethenda: Ukulayishwa kwabokulala endala ezinqoleni
Isaziso Sokuthengwa Kwezimpahla: Ukwakhiwa Kwezinsizakalo Zezinsika ezivela eSitimeleni kuya Esigayini
Ukumenyezelwa kweTender: Ukulayishwa kwabokulala bekhonkta ezinqoleni zomshini wokuvuselela umgwaqo ngokushesha
Ukumenyezelwa kweThenda: Ukusika nokubeka imigwaqo ephuma emgqeni
Amabhasi amadala eBursa